Af-Soomaali | Lighthouse Disability
Adeegyadda aan bixino
Iinta Lighthouse waxay taageero siisaa carruurta iyo dadka waaweyn ee la qaba iimo kala duwan oo dhib badan sida iimaha garaadka iyo kuwa jireed, maanka, dhaawaca maskaxda soo gaadha, xaalladaha sii xumaanaya. Adeegyadeena waxaa ku jira darlyeelka ka nasinta, hoy la taageerayo 24/7 oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn iyo taageerada ay ka helayaan kagana qaybgelayaan nashaad bulshadeed kala duwan.
Iinta Lighthouse, waxaan aqoonsan ahay in qof waliba gaar yahay. Waxaan caawinaa dadka iinta qaba si loo ogaado taageeradda ay baahan yahay si ay u gaaraan ujeedooyinkooga gaarka ah, iyo inay gaaraan heerkooda ugu sareeya oo ay ku noolaadaan nolol weyn.
Annagoo isticmaalayna Tallaabo Qofka Ku saleysan, si aad ugu dhow ayaan ula shaqeynaa dadka aan taageerno, iyo qoysaskooda, si loo fahmo waxa khaas u ah, muhiim u ah qofkasta. Waa nagga go’ an tahay inaan dadka ka caawino inay ogaadaan adeegyada iyo nooca taageero ee isbedelka weyn u sameynaysa oo qofkasta siineysa kontoroolka iyo doorashada weyn ee noloshooda.
Sannadahan intii lagu jiray, waxaan muujinay siday nooga go’an tahay hagaajinta natiijooyinka qofkasta oo aan taageerno. Shaqaalaheena aqoonta leh iyo khibrada waxay ogyihiin in dadka qaba iinta laga yaabo inay u baahan yihiin adeegyo kala duwan oo ka jawaabaya baahidooda shakhsiyeed iyo in baahiyahani ay isbedeli karaan wakhti ka dib. Si loo hubiyo natiijooyinka ugu muhiimsan ee dadka aan taageerno, Iinta Lighthouse waxay la hawlgashaa qoysaska waxayna kula shaqeysaa si shurko ah adeeg bixiyayaasha kale sida shaqaalaha caafimaadka taageera, barnaamijyo maalmeedka, dhaqaatiirta guud iyo ururada bixiya qalabka.
Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegeena, fadlan ka soo wac Iinta Lighthouse 8256 9800 midka mid ah shaqaalaheena saaxiibtinimada leh ayaa ku farxi doona inay kaa caawiyaan weydiintaada.